* Kutumira / Kudzosera Policy YeVatengi Vepasi Pese (Kunze kweUS) - MORPH Chipfeko
* Kutumira / Kudzosera Policy YeVatengi Vepasi Pese (Kunze kweUS)
Nekuda kwe COVID19, nguva dzekutakura pasirese dzinogona kuwedzerwa. Tinokumbira kushivirira kwako panguva ino. Kutumirwa kuri kusvika, asi anofungidzirwa mazuva ekutumira pane yedu saiti haasi kuratidza chaiwo ekuendesa nguva nekuda kwedenda iri.
TINOGONESESA KUSHANDISA DHL EXPRESS. Isu tiripo vanonzi kubvisa madhora makumi maviri neshanu kubva kumaodha epasi rese ekutumira paanorayira kudarika $ 197. Pakubuda unogona kuona chikwereti chekubhadhara. Iyi ndiyo mari yasara yekutumira mushure mekunge madhora makumi maviri nemashanu abviswa. Isu takataurirana zvakadzama mitengo yakaderera nevose vedu vatumwa nekuda kwehuwandu hwekutakura. DHL Express iyo chete inoshanda yepasi rese courier panguva ino. Iwe uchaona yako inofungidzirwa yetsika / yemitero yemitero nekuda kweyako yekutakura kana iko kutumirwa kwasvika. Iyi fizi inokodzera nyika yako, kwete Morph Clothing.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti munonyora yako chaiyo nhamba dzenhare kuti vakwanise kusvika kwauri kana vagadzirira kuendesa.
Vatengi mukati meUS vanogashira yemahara standard kutumirwa pane maodha anodarika $ 197. Canada vatengi vanozogashira mahara kutumira kusvika kumadhora makumi maviri nemashanu pamaodha anodarika $ 25.
ZVINOKOSHA KWEVEDU VENYIKA VENYIKA:
KANA UCHIRAMBA KURIPA ZVAKO ZVINODZIDZISWA, MITSITSI KANA MABHUKU MABHASI PAMUSORO PEKUTAMBIRWA KWAKO KUTENZWA KANA KUTI URAMBE KUTENDA KUKWESHWA, HAUDZWE KUDZIDZISWA KUTENGA KWAKO.
KUDZOKA uye KUCHINJA: Morph Clothing INOGONA kuchinjanisa kana kuita kuti chinhu chidzorerwe kana tikakutumira chinhu chisiri icho. Semuenzaniso, yako odha inotaura saizi yakakura uye isu tinotumira idiki, kana kana tikakutumira iwe rimwe vara rakasiyana neiro rawakaraira. HATINOGONESESA KANA KUDZIDZISA HUDZIDZO HWAKO PANE CHIMWE CHIKAMU. Kana iro jasi / saizi rehembe rawakaraira risingakwane kana iwe usiri kugutsikana nemuvara, isu hatigone kuchinjana kana kudzoka. Izvi zvinokonzeresa kuomarara kwemitemo yekunze / yekuendesa kunze iyo inosiyana zvakanyanya kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe nyika.
Izvo zvakati, TIRI PANO KUTI TIBATSIRE! Yedu yevatengi sevhisi yepamusoro uye isu tinogara tiri pano kuti tikubatsire kusarudza chipfeko chakakwana. Ndokumbirawo usazeze kusvika nemibvunzo pamberi unoisa odha yako.